The House That Jack Built (2018) | MM Movie Store
Rating 7.2 နဲ့ ကွညျ့ဖူးသမြှလူသတျကားတှထေဲမှာအမိုကျဆုံးလို့ပွောလို့ရတဲ့ လူသတျကားဖွဈပါတယျ…တခြို့တှကေ ကိုယျတနျဖိုးတဲ့အရာကိုဖနျတီးတာကိုအနုပညာလို့ယူဆကွပါတယျ…ဒါပမေယျ့ လူသတျတာကို အနုပညာတဈခုလိုသဘောထားပွီးလုပျတာကတော့ တျောတျောကွီးကိုဆိုးဝါးတဲ့အလုပျပါ….
ဂကျြဆိုတဲ့လူဟာ လူတှကေိုအကွောငျးမရှိဘဲနဲ့ လိုကျလံသတျဖွတျနတေဲ့စိတ်တဇလူသတျသမားတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျသူဟာတခွားသောလူသတျသမားတှနေဲ့မတူဘဲ လူသတျရသညျကိုဂန်တဝငျအနုပညာရပျတဈရပျအနနေဲ့တှေးပွီး ကြူးလှနျတတျတဲ့သူပါသူ့အနနေဲ့ ဘယျလိုဘယျပုံတှေ ဆကျဖွဈမယျဆိုတာကိုတော့…
လူသတျကားတှကေိုမှကွိုကျတဲ့လူတှအေတှကျစနဈတကလြူသတျနညျးတှနေဲ့မြားလှသောလူသတျခနျးတှပေါလို့Rating လညျးးလနျးတယျ လူသတျတာတှလေညျးပကျစကျတယျဆိုတော့ ….ကဲ ကွညျ့ကွမှာလား မကွညျ့ကွဘူးလား……
Rating 7.2 နဲ့ ကြည့်ဖူးသမျှလူသတ်ကားတွေထဲမှာအမိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ လူသတ်ကားဖြစ်ပါတယ်…တချို့တွေက ကိုယ်တန်ဖိုးတဲ့အရာကိုဖန်တီးတာကိုအနုပညာလို့ယူဆကြပါတယ်…ဒါပေမယ့် လူသတ်တာကို အနုပညာတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးလုပ်တာကတော့ တော်တော်ကြီးကိုဆိုးဝါးတဲ့အလုပ်ပါ….
ဂျက်ဆိုတဲ့လူဟာ လူတွေကိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ လိုက်လံသတ်ဖြတ်နေတဲ့စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာတခြားသောလူသတ်သမားတွေနဲ့မတူဘဲ လူသတ်ရသည်ကိုဂန္တဝင်အနုပညာရပ်တစ်ရပ်အနေနဲ့တွေးပြီး ကျူးလွန်တတ်တဲ့သူပါသူ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့…
လူသတ်ကားတွေကိုမှကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်စနစ်တကျလူသတ်နည်းတွေနဲ့များလှသောလူသတ်ခန်းတွေပါလို့Rating လည်းးလန်းတယ် လူသတ်တာတွေလည်းပက်စက်တယ်ဆိုတော့ ….ကဲ ကြည့်ကြမှာလား မကြည့်ကြဘူးလား……